Mogadishu Journal » Wasaaradda Caafimaadka oo sheegtay in Shahaadada baarista COVID-19 laga qaadan karo oo keli ah, Sheybaarka Dhexe
War saxaafadeed ka soo baxay, wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka bulshada ee xukuumadda Soomaaliya, ayaa lagu sheegay in qof kasta oo dalka ka dhoofaya uu shahaadada caafimaadka ka qaadan karo oo keli ah, sheybaarka qaranka.
Wasaaraddu waxaa ay cadeysay in xarunta sheybaarka qaran ee Muqdisho ay heysato aqoosiga baarista COVID-19 isla markaana leh tiraac iyo sumadda sheybaarka dhexe. Wixii intaas ka soo hara, waxaa ay wasaaraddu u aqoonsan tahay waxba kama jiraan, sidoo kalena baal marsan hanaanka baarista safmarka COVID-19.
Bayaanka ka soo baxay, wasaaradda Caafimaadka ayaa sidoo kale, lagu xusay in wasaaraddu diyaarisay habka online oo lagu hubinayo in qofka wata shahaadada uu ka soo qaatay sheybaarka dhexe oo lagu diyaariyay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho.
Wasaaradda caafimaadka, ayaa sheegtay in dadka doonaya in shahaadadaas qaataan ay tagi karaan xarumaha baarista oo ku kala yaala isbitaalada; De Martino iyo Banaadir ee magaalada Muqdisho.